पानी स्वास्थ्यको लागि निकै उपयोगी पदार्थ हो । मनतातो पानी स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुने बताइएको छ । स्वास्थ्य मात्रै होइन आफ्नो सौन्दर्यलाई निखार्न समेत मनतातो पानी निकै फाईदा जनक मानिन्छ । यसले हाम्रो शरीरलाई औषधीको समेत काम गर्छ । पानीलाई थोरै तातो प्रयोग गर्नाले कब्जियतको समस्यालाई समेत दूर गर्न मद्दत गर्छ । यदि तपाईं मोटोपनको शिकार हुनुहुन्छ भने पनि तातोपानीले छुटकारा दिनको लागि निकै सहयोग गर्नेछ ।
२. तोतोपानीमा स्नान गर्नु थकाई मेटाउने निकै आरामदायी साधन हो । तातोपानीले छालालाई निखार्ने मात्रै होइन छाला सम्बन्धी विरामीलाई समेत तातोपानीले निकै फाइदा गर्छ ।
१०. स्वास तथा मृगौला सम्बन्धी रोगभएको व्यक्तिले चसो पानी पिउनु फाइदा जनक हुँदैन । त्यसैले तातोपानी निकै फाइदाजनक मानिन्छ । चिसो मौसममा चिसो पानी पिउनु हुँदैन । मन तातो पानी पिउनुहोस् भविष्यमा हुने रोगबाट बाँच्नुहोस् ।